कोरोना महामारीबीच बाँचिरहेकाको सपना :: Setopati
जनक राज पन्त वैशाख ३०
मानवीय चेतना बढेसँगै मानिसहरुको प्रगतिले संसारमा धेरै प्रगति भएका छन्। विश्वमा अनेक किसिमका नवीनतम विकास र वैज्ञानिकताले संसार साह्रै रमाइलो र सहज भएको छ।
वर्गीय र आर्थिक रुपमा समाजमा ठूलो खाडल छ। समानता र न्याय सबैतिर उठ्ने माग र सरोकार हुन्। तर आज सारा विश्व गम्भीर संकट र चुनौतीहरुसँग युद्ध गर्दै समग्र विश्वमा मानव जातिको अस्तित्व जोगाउनु क्रियाशील भएर लागिरहेको छ।
मान्छेहरुको जीवन भोगाइ, चुनौतीहरुसँगै पैठाजोरी खेल्दै अरुभन्दा भिन्न र फरक हुने, धनी र सम्पन्न हुने चाहना आज देखिएको विश्वव्यापी महामारीले एकपटक ब्रेक लगाई रोक्न बाध्य भएका छौँ। कोभिडले अहिले समाजका हरेक वर्ग, समुदाय र जातजातिहरुलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाइरहेको छ।
समाजका तपाई हाम्रा सबैका प्यारा मान्छेहरुलाई मसान र घाटसम्म पुर्याउँदै गरेका तस्बिरहरुले सबैको मनमा नराम्रो लागिरहेको छ। सबै धुरु धुरु रोइरहेका छन्।
मर्नेहरुले मर्नु अगाडि जीवनमा देखेका सबै सपनाहरु पूरा गर्न नसकी हामीबाट टाढा भए र बीच बाटोबाटै अस्ताए जसरी घाम अस्ताउँछ। यहाँ जिउनेहरुमा सपना कति छन् कति। खै! ती पूरा हुन्छन् हुँदैनन्, भगवानलाई छोडौँ।
राजनीतिक खेलमा डुब्ने पापी मनहरुले सत्ता र स्वार्थको कति सपना मनभरि बुनेका छन् होला। सँच्चा मनकारी राजनीतिज्ञहरु यतिबेला आफ्ना प्यारा मतदाताहरुको जीवनरक्षा तथा गाँसबासमा गाउँघरतिर खटिएका छन् होला।
उद्योगधन्दामा कालाधन्दा गरी जनतालाई मार्ने शोषक उद्योगी करोडौँ, अर्बौं कमाउने दाउको सपना बुन्दै योजना बनाउँदै छन् होला भने राष्ट्रप्रेमी उद्योगी दाजुभाइ, दिदीबहिनी आजभोली गाँस नपुगेका रोगी बिरामी तथा राष्ट्र संकटमा हुँदा बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर सरकारलाई बुझाउँदै राज्यमा जिम्मेवार र मनकारी भई दान र सहयोग गर्न सरकारको खोजीमा होलान्।
व्यापारीमा पनि त कति सपना होलान्। कतिले गोदाम खाली गरी गरिब बस्तीसम्म खाद्य संकट हटाउँदै पारर्दशी र जिम्मेवार भूमिका राज्यको नीति भित्र रही गरेका होलान् भने काला मनकारी व्यापारी मास्क र सेनिटाइजरबाट अर्बौं कमाई महल ठडाउने दाउमै होलान्।
स्वास्थ्य सेवामा तल्लीन अविचलित भगवानहरुले ज्यान जोखिममा राख्दै बिरामीको लागि प्राणदाता भएर मिठा मिठा सपनामा बिरामीसँगै रमाएका छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरु सिटामोल र डिकोल्ड लुकाएर करौडौँ कुम्ल्याउने र धनी बन्ने सपना देखिरहेका होलान्, कालोबजारी र ठगीधन्दामा।
संसारमा सबैभन्दा अमूल्य कुरा मानवीय जीवन हो। जीवन रहे हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सपनाहरु पछ्याउछौँ। केही पूरा हुन्छन् केही बाटोमै रहँदै हामी हराउँछौँ। सपना यहाँ मान्छे आफ्नो कर्म, पेशा, योग्यता, र क्षमताका साथै देखासिखी, लोभ, आवेग, लहलहै, आदिमा परेर गर्छन्।
सपना देख्नु राम्रो कुरा हो। मान्छे सपनाको लाइनलाई टेक्दै अघि बढिरहेको हुन्छ। जन्म र मृत्यु निश्चित प्रायः छ। सँच्चा कर्मले सेवा गरी सपनाहरु पूरा गर्नु मानवीय धर्म हो।
आज विश्वमा देखापरेको कोभिडको महासंकटमा विद्यार्थीका पढ्ने र ठूलो मान्छे बन्ने सपनामा ब्रेक लाग्दै छ। शिक्षकले आफ्ना नानी बाबुलाई बाड्ने ज्ञानमा र सपनामा बाधा भएको छ। निस्वार्थ भावले राष्ट्रको सेवामा खटिनेका सपनाहरु कति बाँकी छन् कति।
किसान र मजदुरका भविष्यका सपनाहरु आजभोलि सायद हराउँदै गएका छन् होला। भन्दै छन् होला- हे भगवान! महल र दुई छाक खान बरु नपुगोस्, एकै छाक खाउँला। मलाई यो रोग र संकटबाट भने टाढा राख।
आर्थिक क्षेत्रमा कोभिडले गम्भीर क्षति पुयाउँदै गएको बेला बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा रमाउनेहरुले पनि कसैको घरबास नउठोस्, बिरामी र रोगले नछोएसम्म किस्ता र ब्याजको चिन्ताले यो संकटमा डिप्रेसन र आत्मा ग्लानी नहोस्। बैँकका नाफाका सिढीँहरु जनता जोगिएछन् र आर्थिक वातावरण सामान्य भएपछि रङ्गग्याउला।
हालको यो संकटमा जनतालाई राहत हुने र सरकारलाई टेवा पुर्याउने र हामीले कमाएका नाफाका हिस्सा कोभिडमा जोगिन सपना देखिरहेकाहरुमा खर्च गर्न नियमनकारी निकायको अग्रसरता हुँदा यसमा खटिएको हजारौँ उर्जावान, लगनशीलहरुले पुन्य कमाउने सपना साकार हुनेछ।
संसारका अधिकांश देश कोभिडले थला परिरहेका सन्दर्भमा विश्वका धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरुले आर्थिक र प्राविधिक रुपमा निस्वार्थ भावले कमजोर र पीडामा छट्पटाइरहेका राष्ट्रहरुमा मानव जातिको अस्तित्व बचाउनु लाग्नु पर्दछ। यसले मात्र सबैको भलो हुनेछ।
विश्वको एक साझा समस्याको रुपमा कोभिडलाई बुझी यसमा विश्वमन्चका संघसंस्थाहरु एकजुट हुन आवश्यक छ। हुनेले नहुनेलाई सक्दो सहयोग गरौँ। चाहे आर्थिक, सामाजिक रुपमा, मानवीय रुपमा अथवा जागरणको रुपमा। यसले गर्दा स्वसक्षमता पैदा भई रोग र संकटको निवारणमा सहजता हुनेछ।
कोभिडलाई विभेदकारी सोच, आलोचना तथा सामाजिक संजालको हल्ला वा प्रचारको विषय नबनाई सुरक्षित रुपमा सावधानी तथा जिम्मेवार रुपमा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट लडौँ, योग्दान दिउँ।
एकदिन कालो बादल हटेर उज्यालो प्रकाश सबैतिर लागी विश्व खुसीले नाच्ने छ। सबैले खुसियाली मनाउने छौँ, घरघरमा विजय उत्सव हुनेछ। मानव जातिको अस्तित्व संरक्षण भई कोभिड परास्त भएको हुनेछ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ३०, २०७८, १५:१०:५२